Hehy · Aogositra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Hehy · Aogositra, 2011
Tantara mikasika ny Hehy tamin'ny Aogositra, 2011
Alavoly Mahatsikaiky Miaraka Amin'ny mèmes Tenifototra Japoney
Azia Atsinanana 17 Aogositra 2011
Nanomboka tamin'ny nanomezan'i Twitter ny fahafahana manao tenifototra Japoney, lasa mitobatobaka ny kilalaon-teny amin'ny tontolon'ny Twitter Japoney.
Kolombia: Polisy Nandihy Nirary Tongasoa Ho Anà Mpilalao Baolina Kitra
Amerika Latina 13 Aogositra 2011
Tao Medellin, Kolombia, tao amin'ny seranam-piaramanidina dia naneho hetsika fiarahabàna an'ireo mpilalao baolina kitra ireo manamboninahitry ny polisy, nahafinaritra ireo mpitsidika izany fa kosa nahatonga olana momba ny filaminana ho an'ny toerana sasantsasany.
Taratasy Iray Avy Ao Shina Ho An'ilay Norveziana Mpamono Olona
Azia Atsinanana 06 Aogositra 2011
Maro ireo mponina ao Shina no tsy mahazo ny zava-doza nataon'i Anders Behring Breivik tao Norvezy. Saingy kosa tsy dia miraharaha ny antony nanosika azy sy ny foto-kevitra nijoroan'i Breivik. Eo imason'izy ireo, Norvezy dia paradisa, any ny olona no miaina amin'ny fahafaha-mividy ambony ary tsy mila ny hiatrika ny fahasahiranana ara-pivelomana. Ahoana no mahatonga izany?
Litoania: Ben'ny Tanàna Anaty Fiara Mifono Vy mamotika Ny Fiara Miantsona Tsy Ara-Dalàna
Eoropa Afovoany & Atsinanana 06 Aogositra 2011
Lotika loatra amin'ireo fiara lafovidy miantsona amin'ny toerana tsy ara-dalàna eny amin'ny faritra natokana ho an'ny kodiaran-droa ny Ben'ny tanànan'i Vilnius...notapahany ny hevitra fa hanome ohatra ranamana ka dia nohitsahany tamin'ny fiara mifono vy ilay fiara